Bookmark the permalink.	ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေခါနီး ဖတ်ဖို့။
by ချစ်သူအတွက်	ဟေ့ ဒီမှာ! မင်းကိုယ်မင်း သတ်သေချင်နေသလား? ဒီစာလေးကို တစ်ချက်တော့ ဖတ်ကြည့်စမ်းပါ။ အရှည်ကြီးမဖတ်နဲ့ ငါးမိနစ်ပဲဖတ်။ ငါးမိနစ်ကျော်ရင် မင်းလုပ်ချင်တာ ဆက်လုပ်၊ ဟုတ်ပလား။
မင်းဘယ်သူလဲ ဆိုတာ ငါမသိဘူး။ ဘာကြောင့် ဒီစာကို ဖတ်နေရလဲလို့လဲ ငါမသိဘူး။ ငါသိတာ တစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ အခု မင်း ဒီစာကို ဖတ်နေတယ်၊ အဲဒါကောင်းတယ်။ ဘာလို့ ဖတ်နေရသလဲဆိုတော့ မင့်မှာ ဒုက္ခကြီးတစ်ခုခုရှိနေတယ် ဒါကြောင့်မင်းကိုယ်မင်း သက်သေဖို့ စဉ်းစားနေတယ်၊ ဟုတ်တယ် ဟုတ်။
ဒါပေမဲ့ ငါသိတယ်၊ အဲဒါ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေချင်တဲ့ သူတွေအကြောင်း အများကြီး ငါသိတယ်။ ဒါကြောင့် မင်းဘယ်လိုခံစားနေရသလဲဆိုတာ ငါတပ်အပ်နီးပါး ငါမှန်းလို့ရတယ်။ မင်း စာအရှည်ကြီး မဖတ်ချင်ဘူးဆိုတာလဲ ငါသိတယ်။
ကောင်းလိုက်တာ။ မင်းဆက်ဖတ်နေတာပဲ။ အရမ်းကောင်းတယ်။ မင်းသာ ဒီစာဆုံးတဲ့အထိ ဆက်ဖတ်ဖြစ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ မင်းရဲ့စိတ်အတွင်းဆုံးပိုင်းထဲမှာ ချီတုံချတုံအတွေးကလေးတစ်ခုတော့ ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ ငါထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မင်းက မင်းဘ၀ကိုတော့ အဆုံးသတ်တော့မှာပဲနော်။ လူတွေ အဲဒီလို မကြာခဏ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် အဆိုးဆုံးဖြစ်သွားပြီလို့ စိတ်ပျက်သုဉ်းသွားတတ်တာမျိုးလေ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုသေပစ်လိုက်ခြင်းဟာ အရာရာ အိုကေသွားမယ်လို့ မင်းထင်သလား? ပုံမှန်ဆုံးဖြတ်မှုလို့ မင်းထင်သလား? အနည်းဆုံးတော့ အခု မိနစ်ပိုင်းလေးတွေမှာ မင်း ဆက်အသက်ရှင်နေသေးတယ်။ အဲဒါ မင်းမှာ ဒွိဟစိတ်တွေရှိနေသေးတာကိုပြတာပဲ။ မင်းသေချင်နေတဲ့ တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲ မင်းမှာ ဆက်ရှင်သန်ချင်နေသေးတဲ့ စိတ်လည်း ရှိနေတယ်။ ဒါကြောင့် မိနစ်နည်းနည်းလောက် ဆက်သွားကြည့်ရအောင်။
ကဲ … အဲဒါကိုကြည့်စမ်း။ တကယ်တမ်း အမှန်တော့ မင်းသေချင်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မင်းခံနိုင်ရည်ထက်ကျော်လွန်ပြီး နာကျင်ခံစားနေရလို့ပါပဲ။ ငါ မင်းပခုံးပေါ် တပြုံတစ်ခေါင်းကြီး တင်လိုက်ရင် မင်းလဲပြိုကျသွားမယ်၊ မင်းဆက်ရပ်ချင်ချင် မရပ်ချင်ချင်ပေါ့။ စိတ်တန်ခိုးက ဒီနေရာမှာ ဘာမှသုံးစားမရဘူး။ တကယ်ပြောတာ။ မင်းတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် မင်းကိုယ်မင်း အားတက်အောင်လုပ်မှာပဲ။ ငါသိတယ်။ တခြားသူတွေပြောတာ ဂရုမစိုက်နဲ့။ ခံစားမှုဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တူတာ မဟုတ်ဘူး။ မင်းအတွက် သည်းမခံနိုင်တဲ့ကိစ္စဟာ တခြားတစ်ယောက်အတွက် အရေးမပါတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။ တခြားတစ်ယောက်သေမလောက်ဖြစ်နေတာမျိုးကို မင်းဖို့ ဟားပစ်လောက်စရာဖြစ်ရင်လဲ ဖြစ်မှာပဲ။ လိုအပ်တာက မင်းရဲ့ ခံနိုင်ရည်အားနဲ့ မမျှအောင် ဘယ်လို ခံစားမှုမျိုး ရောက်လာသလဲဆိုတာပဲ။
မင်းကို နည်းလမ်းလေးငါးခုပေးချင်တယ်။ ၁) တခြားသူတွေ သူတို့ခံစားခဲ့ရဘူးတဲ့ အရမ်းဆိုးရွားတဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာတွေကို ဘယ်လို ကျော်လွှားခဲ့ကြသလဲ? မင်း စူးစမ်းပါ။ အဲဒါ မင်း အသက်ရှင်ဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းပဲ။
အခု မင်းကိုယ်မင်း သတ်သေချင်နေတာဖြစ်တယ်။ အဲဒါ အခု မိနစ်ပိုင်းအတွင်း မင်းလုပ်မှဖြစ်မယ်လို့ ဆိုလိုတာမှ မဟုတ်ပဲ။ မင်းရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေချင်နေတဲ့ ခံစားမှုနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေမယ့်လုပ်ရပ်ကြားမှာ အပိုင်းအခြားလေးတစ်ခုပဲ ထားပေးစမ်းပါ။ ၂၄နာရီလေးပါပဲ။ အခုတောင် ဒီစာဖတ်ရင်း မင်း ငါးမိနစ်လောက် ကျော်လာခဲ့ပြီလေ။
၃) လူတွေဘာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေသလဲ? ဝေဒနာခံစားရမှုတွေက `သက်သာ´ ရာရအောင်ဖြစ်တယ်။ မှတ်ထားစမ်းပါ။ သက်သာတယ်ဆိုတာ ခံစားမှုပဲ။ မင်းအသက်ရှင်နေမှ ခံစားလို့ရမယ်။ သေသွားရင် သက်သာတာကို မခံစားနိုင်တော့ဘူး။ ၄) တစ်ချို့လူတွေက မင်းကိုယ်မင်းသတ်သေချင်နေတဲ့အကြောင်းသိသွားရင် သိပ်ဆိုးဆိုးရွားရွားတုန့်ပြန်လိမ့်မယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ သူတို့ ကြောက်လို့ ဒေါသထွက်လို့။ အဲဒီအခါမှာ သူတို့ရဲ့ အပြုအမူတွေဟာ မင်းကို ကူညီရာမရောက်ပဲ ဝေဒနာ ပိုတိုးလာအောင်လုပ်သလိုဖြစ်နေတတ်တယ်။
ကဲ … လာ၊ ထ အခုပဲ တစ်ယောက်ယောက်ဆီ ဖုန်းခေါ်လိုက်။